Buundada London: Qofka weerrarka gaystay horaa loogu xukumay falal argagixiso | Hangool News
Buundada London: Qofka weerrarka gaystay horaa loogu xukumay falal argagixiso
Ninka weerrarka soo qaadday oo booliisku magaciisa ku sheegay Cismaan Khan oo ah 28 jir, hore u ahaa maxbuus bannaanka ku joogay damiin waqtiga uu weerrarka dhacayay, kaas oo lagu dilay nin iyo haweeney saddex qof oo kalana waa ay dhaawacmeen.
Khan ayaa waxaa toogasho ku dilay boooliska kaddib markii xubno ka tirsan dadweynaha ay ninkaasi hareereeyeen.
Booliiska ayaa weerarkaasi ku tilmaamay fal argagixiso.
Mas’uuliyiinta ayaa aqoon u lahaa Cismaan Khan, oo waxaa ninkaas falal argagixiso loo xukumay sanaddii 2012-kii, sida uu sheegay taliye ku xigeenka boooliiska London Neil Basu.
Image captionDhowr qof ayaa lagu dhaawacay weerarkan, sida ay boolisku sheegeen
Booliiska ingiriiska ayaa imika baaritaan ku haya goobtii uu ku noolaa Mr Khan.
Image captionCismaan Khan, 28, ayaa waxaa la xiray 2012